Vakuru veBritain vanozviparadzanisa kubva kuposita inopokana | Linux Vakapindwa muropa
Iyo UK National Crime Agency (NCA) yakabuda kunozivisa pachena kuti haina chekuita nayo nechiratidzo chinotsausa chakagadzirirwa kutya vabereki nekuvakurudzira kuti vafonere mapurisa kana vana vako vari kushandisa Kali Linux uye mamwe maturusi esoftware
Iyo posita, yakaitwa pachena ne Twitter mushandisi @G_IW, yakagoverwa nezviremera zvemunharaunda pachinzvimbo cheWest Midlands Regional Organised Crime Unit (WMROCU). Nechimwe chikonzero iyo NCA yakaverengerwa sekuisimudzira.
Iyo skrini ye Twitter inoverengwa
Chii chiri pakombuta yevana?
Tor: Bhurawuza yakashandiswa kuwana iyo yakasviba webhu.
Muchidimbu muchina: Iyo inobvumidza kuvanza mashandiro masisitimu ayo asingawanzo kuwanikwa mumakomputa, senge Kali Linux.
KaliLinux: Iyo inoshanda sisitimu inowanzo shandiswa kubiridzira.
Chinanazi WiFi: Icho kitiki chidiki chinogona kushandiswa kuwana yakajeka data kubva kuInternet.
Discord: Iyo inozivikanwa yekukurukurirana chikuva inowanzo shandiswa kugovana kubiridzira manomano.
Metasploit: Icho chishandiso che software chinoita kuti kugura kuve nyore.
Kana iwe ukaona chero avo pakombuta yako, kana uine mwana anofunga kuti vari kubira, tiudze isu kuitira kuti tigovayambira nekuvatungamira kuenda kune yakanaka mafaro.
Vakuru veBritish vari kuzviparadzanisa kana kwete?
Tichifunga huwandu hwemashoko asina kunaka agamuchirwa, iyo National Crime Agency yakabuda kujekesa kuti yakanga isina chekuita nekudhinda kwako kana kugovera. Zvisinei, akati:
Kune maturusi mazhinji anoshandiswa nevana ve tech-savvy, mamwe acho anogona kushandiswa pazvinhu zviri pamutemo uye zvisiri pamutemo, saka zvakakosha kuti vabereki nevana vazive mashandisiro emidziyo iyi.
Kune kwavo, mapurisa eWest Midland akabatsira mukukanganiswa kukuru:
Iyo poster, yakaburitswa neyechitatu bato, yakagadzirwa seyeuchidzo yekubatsira vadzidzisi nedziviriro muzvikoro. Yakatorwa kubva kune yakafararira ruzivo rwezvishandiso zvecyber izvo zvinogona kushandiswa kuita cyberattacks, asi izvo zvakare zvine chinangwa chepamutemo.
Iyo software yambotaurwa ndeyepamutemo uye, mune yakawanda kesi, inoshandiswa zviri pamutemo, izvo zvinobatsira zvikuru kune avo vanofarira kusimudzira ruzivo rwavo rwemadhijitari. Nekudaro, sekune chero software, inogona zvakare kushandiswa zvisirizvo neavo vane zvinangwa zvisiri pamutemo. Chinangwa cheichi posita kwaive kupa nekukurumidza kunongedzera gwara kune huwandu hwesoftware inowanikwa, kuitira kuti avo vane basa revabereki kuvana nevechidiki vatange nhaurirano nezve yakachengeteka uye zviri pamutemo kushandiswa kwemakomputa uye tekinoroji.
Kubva kuKali Linux vakazvitora nekuseka. Pa Twitter ivo vakanyora kuti:
Tinofanira kubvuma kuti zvakanaka kuti vanopa vana gwara remugwagwa kuti vatange. Isu tese tinoziva kuti nzira yakapusa yekuita kuti mwana aite chimwe chinhu kumuudza kuti haagone kana haafanire, uyezve womupa rondedzero yezvaasingafanirwe kuita. Chinhu chakashata ndechekuti havana kubatana nazvo https://kali.training
Kunyanya zvakanyanya, mutauriri wesangano riri kumashure kwaKali LInux akataura kuZDNET:
Ini ndinofunga mamiriro ese aya anondiyeuchidza nezvezvizvarwa zvinotyisa zvinoitika nemumhanzi wedombo, mitambo yemavhidhiyo zvichingodaro Ndinovimba hapana mubereki anozvitora zvakanyanya uye anonzwa sekunge vanofanirwa kudaidza mapurisa kuvana vavo kana vakavawana vachishandisa Kali kana kutaura nevamwe paDiscord sezvo kuri kuseka kwakanaka.
Iyi yese mikana isingaite yevabereki yekuita nevana vavo, kutsvaga zvavanofarira, uye kushandisa nguva pamwe chete vachibatsira mwana kudzidza hunyanzvi huchavabatsira gare gare muhupenyu.
Kana iwe usinganzwisise chimwe chinhu icho mwana wako chaari kuita, panzvimbo pekufungidzira nezvazvo, bvunza mwana uye dzidza kubva kwaari. Pakupedzisira, hapana yenyaya iyi ine chekuita naKali kana chero chimwe chishandiso chakataurwa pachikwangwani, asi zvine chekuita nemabatiro akanaka ekuita mubereki anobata uye kusanzwisisa kwevamwe vanhu kuti zvinorevei.
Nemvumo yako, ndichaenda kumberi uye kumbira mutemo waGodwin. Izvo zve Koka kusheedza zviremera kana mumwe munhu akashandisa kana kuita chimwe chinhu, zvinondiyeuchidza nezvazvo zvinyorwa pamusoro penzira dzekutaurirana dzevaNazi. Kana ku kushambadza kwakapihwa neudzvanyiriri hwekupedzisira hweArgentina izvoiyo ini ndakave nemukana wekuona munguva chaiyo ndiri mwana.
Ehe, ndiri kutaura nezvezvinhu zvisina kusarudzika mukodhi yekuranga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vakuru veBritish vanozvisiyanisa kubva kune inopokana posita nezve Kali Linux uye imwe software
Kubva kuvakagadziri ve ... yemahara software ndeyavaCommunist uye Linux igomarara rinouya: «Mhan'arira mwanakomana wako kana akashandisa Kali ... igandanga».
Rangarira kuti zvese zvakanyorwa pano zvinogona kutorwa zvichipesana newe. Ziva izvo zvaunoburitsa pane network.